Guddiga doorashada M/Soomaaliya oo 9-dob oo sharuudo ah kasoo saaray doorashada madaxwaynaha. – Radio Daljir
Seteembar 2, 2012 1:14 b 0
Moqdisho, Sep, 01 – Guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta soo saaray shuruudo uu sheegay in looga baahan yahay inay buuxiyaan musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya.
Afhayeenka guddiga doorashada Cismaan Libaax Ibraahim oo maanta shir jaraa?id ku qabtay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u akhriyay shuruudaha, waxaana ka mid ah.
1-? Inuu musharraxa madaxweynaha yahay muwaaddin Soomaaliyeed oo Muslim ah
2-? Inaaneyn da?diisu ka yareyn 40 sano
3-? Inuu leeyahay aqoon ama waayo-aragnimo u qalanta xilkaas
4- Inuu dhimirkiisu dhan yahay
5- Inuusan gelin dambi culus oo ay maxkamad xukuntay
6- Inuu bixiyo lacag dhan 10 kun oo doollar oo ah diiwaan-gelin
7- Inuu soo gudbiyo taariikh nololeedkiisa (CV)
8- Inuu soo gudbiyo labo sawir oo midab leh
9- Inuu soo gudbiyo codsi musharraxnimo oo labo nuqul ah.
Afhayeenka guddiga doorashada ayaa sheegay inuu weli harsan yahay qodob ka mid ah shuruudaha oo uu sheegay inay hor-geyn doonaan baarlamaanka ka hor intaan la shaacin maalinta berri ah.
Qodobkaas ayaa ah in musharrax kasta marka u horreysaba uu taageero ka haysto ugu yaraan 20 ka mid ah xildhibaannada baarlamaanka.
In ka badan 25 musharrax ayaa isu soo taagay inay qabtaan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya.
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in lagu qabto magaalada Muqdisho 10-ka bisha September.